Ukusetyenziswa kakubi ngokwesondo - abenzi bokugwenxa, baqaphele iimpawu kunye nokwenziwa kwamanyathelo
UkuSetyenziswa kakubi ngokwesondo - Ukukhuselwa kunye neMpawu imfundo
Ingozi kunye nomvuzo - xubusha ngeendlela zokuphulaphula nabantwana
Indlela yokukhusela abantwana ekuhlaselweni ngokwesini kwi-Intanethi?
Ukuthi ukhuseleko lwe-intanethi
Ukuxhaphazwa ngokwesini ngokobuntwana kubantwana kunye nentsha?
Iimpawu zokuxhaphazwa ngokwesondo
Yintoni enokuyenza xa umntwana wakho waxhatshazwa ngokwesondo?
Yintoni enokuyenza xa kukho isikrokro
Bonke abazali bafuna ukukhusela abantwana babo kangangoko kunokwenzeka kubundlobongela nokuxhaphazwa ngokwesondo. Kodwa nini na omnye unokuxoxa ngesi sihloko nabantwana nonke? Yaye yintoni enye ngokulumkisa umntwana wakhe ngokukhethekileyo? Ngaba kuyimfuneko ukutyhila zonke iinkcukacha okanye ngaba kukho imithetho embalwa yokusikhusela umntwana ekuhlaselweni ngokwesondo? Ngenxa yokuba abaphangi bahlala bengamalungu entsapho, isihloko sokuxhaphazwa ngokwesondo sinzima nakakhulu kwaye kufuneka sithathwe ngokubaluleka okukhulu. Kubalulekile ukudlulisela umntwana ukuba yonke inkathazo kunye neloyiko lonke liza kubazali rhoqo.
Ukuxhaphazwa ngokwesondo - ukukhuselwa ngokuzithemba
Abantwana abanokuzithemba abanako ukuhlaselwa kakubi ngokwesondo. Umngcipheko wokuvimbela umenzi wobugwenxa ubonakala uphakamileyo, njengoko ukwesaba ukuba umntwana angakwazi ukuzikhusela okanye ukujongana nokusetyenziswa kakubi ekhaya. Ngoko ke kubalulekile ukunika umntwana wakho umzobo onokuzibonakalisa kunye nokunyamekela iimfuno zakhe zomzimba nokuzihlonela. Oku kuqala ngokumanga kamalume, okwenzelwa umntwana. Ungaze uthinteke okanye ucinezele, okwenza umntwana angakhululeki.
Yeka ukuxhaphazwa kwabantwana
"Oku akubi kakhulu, ziqhekeze kunye kunye, mhlawumbi umalume uhlambalaza" ngumbhede apho imbewu yephuli ihluma kwixesha elizayo. Kungenxa yokuba enokusebenzisa izibhengezo ezinjalo ukuhambisa umntwana kwizinto azifunayo. Oko umfunayo umntwana kunye noko kungenjalo, kuyigqiba ngokwayo. Kwakhona kufuna isibindi ukusho ukuba umntu akafuni ukuthinteka ngu-anti. Ngenxa yoko abantwana bafuna ukuzithemba nokuvakalelwa ukuba bakwazi ukujongana nomzimba wabo.
Ukuba umntwana wakho unamahloni kwaye uyagcinwa, unokukhuthaza ukuzithemba kwakho kwiikhosi ezizodwa. Phantse yonke idolophu namhlanje inayo, kwaye ukuzikhusela kubantwana bezilwane zinikwe ngamanye imibutho. Akukuthi ukuba umntwana onokwenene unokuzikhusela ngokukhululekileyo kumntu omdala, kodwa ulwazi olwaziwa ngumntwana kwikhosi enjalo luyenza luzithembe ngakumbi kwaye lube nesibindi - kwaye lube lukhupha.
Khusela ukuvuleka nemfundo!
Ubuhlobo obuhle nomntwana wakho ngu-alpha kunye ne-omega yokuba umntwana wakho athembele kuwe xa efuna. Ngokuqinisekileyo, kufuneka ukhanyise umntwana wakho ngokubhekiselele kwisini, uvule kwaye ungenamahloni. Ibali kunye neenyosi kunye neentyantyambo ezincinane sele zihambe.
Umntwana angakwazi ukuchaza kuphela into eyaziwayo. Ngoko, vula njengokuba kunokwenzeka, unike zonke iinxalenye zomzimba amagama anelungelo kwaye ungesabi ukuphendula imibuzo yomntwana wakho ngokunyanisekileyo.
Ukuba umntwana wakho uyabuza-kwaye iya kubuza, kuba bonke abantwana abavela kwiminyaka ethile banomdla! - Apho iintsana zivela khona, xelela kuye ngokungakhethiyo kwaye ushiye isorkork ngaphandle. Kukho iincwadi ezinokukhanyisa kunye neephamflethi ezibanceda abazali ukuba bathathe isondo ngaphandle kokuphazamiseka.
Abantwana abaneminyaka engama-5 ubudala kufuneka bazi ukuba yintoni ukusetyenziswa kakubi ngokwesondo. Cacisa umntwana wakho ngokuchasene njengoko kunokwenzeka kwaye ngaphandle kokwesaba ukuba ukuxhaphazwa ngokwesini kuya kwenzeka kwakhona. Ngokuqinisekileyo ukuhamba kwe-tightrope phakathi kokulumkisa nokuxhalabisa.
Ngoko ke, kubalulekile ukuba uxelele nomntwana wakho: kukho, kodwa akunakwenzeka. Kodwa ukuba kwenzeka, kufuneka uxoxe ngawo. Indlela eqhelekileyo yabenzi bokuphambanisa ukuthulisa umntwana. Uya kukwenza usongelo okanye azame ukumelana nomntwana. Okanye wenza izithembiso aze avuze umntwana ngenxa yokuthula kwakhe. Kwakhona, umntwana wakho kufuneka azi. Abo baziyo iindlela ziya kufumana lula ukuqonda ukuba ukuxhaphazwa ngokwesondo kuqale kwaye banokuzikhusela.
Kungenxa yokuba ukuxhaphazwa ngokwesondo kudla ngokuqala ukunyuka kwesantya kwaye kungekhona kwesibini ukuya kwesinye. Umenzi wobubi uvakalelwa indlela eya phambili nangaphezulu kwexesha, imida engaphezulu. Ngoko khuthaza umntwana wakho ukuba athethe ngokukhawuleza malunga nantoni na engamkhathazi kuye, nangona isongelwa. Kumelwe ukwazi ukuba kunokukhuselwa kuphela xa uthetha ngawo.
Ukongeza kwiingcambu ezincinci, i-Intanethi inikezela izigebengu ezikhuthazayo ngesondo esitsha. Eli gumbi kufuneka liqwalaselwe njengaloo nto ngabazali.
Ukukhuselwa ngokuxhatshazwa ngokwesini kwi-Intanethi
Imoya yoLwaphulo-mthetho: I-intanethi ngokwalo ibhetele kakhulu ukuhlala ingaqondakali, kuba inento ekulungeleyo, into ebalulekileyo ubomi obungenakuyenza: ukungaziwa kwaye akukho namangqina. Ngaloo ndlela, ngokukodwa lo mdlalo woluhlu olutsha luyathandwa kakhulu.
Ngelishwa, abantwana, abangayazi kakuhle imithetho yeli hlabathi elitsha, ngaba bahluphekileyo kakhulu. Ngenhlanhla, kukho imigaqo embalwa engundoqo evumela ukuba nomncinci ukuhamba ngokukhuselekileyo kwihlabathi lewebhu.
Ukungaziwa ngabenzi bobubi ngokubhekiselele ekuvulekeni kwabaxhoba
Abaphulaphuli banokufumana kalula imifanekiso, idilesi ze-imeyile, iinombolo zeefowuni kunye needilesi zamaxhoba abo kwi-Intanethi. Ekubeni abantwana nabantwana abaselula bayaphumelela ukuba bayifake emaphandleni awaziwayo, kuba umdlalo wabantwana kubo kwaye ngoko ke ulwazi kuphela aluhlawulwanga. Uninzi lwexesha, abaphangi basebenzisa le ngcaciso ukuze baqhagamshelane namaxhoba abo, bahlala bebancinci kunabo, kwaye badukise umdla oqhelekileyo. Ngamanye amaxesha kunxibelelana ngamagumbi okanye iiforam zikarhulumente, apho udibaniso lokuqala lwenzeka khona. Kule mibutho, abantu abatsha abaneemfuno eziqhelekileyo baqokelelane (umzekelo, iifowuni apho abantu abatsha banokubhala khona amabali abo, anikezelwa ngawo), ukwenzela ukuba ukudibanisa nokuziqhelanisa okuqhelekileyo kungabonakali. Umenzi wobugwenxa usoloko usebenzisa iprofayili yenkohliso, oku kuthetha ukuba idatha yakhe (umhla wokuzalwa, indawo yokuhlala, imfundo yesikolo) ayihambelani nenyaniso njengoko kuchaziwe ngasentla.
Ingxaki leyo kukuba abantwana abaninzi nabantwana abaselula bayaziva bekhuselwe kwiindonga zabo ezine. Ihlabathi kwiwebhu iyinqobo, ngoko ingozi nayo ibonakala iyinyani kwaye ingayifumani indlela yokwenene. Kodwa nini kuqaliswa ukusetyenziswa kakubi ngokwesondo? Asoloko efika kwintlanganiso kunye nomoni ukuba akhulume ngokuxhaphazwa ngokwesondo. Abanye abenzi bobubi babathumela imifanekiso yexhoba ngeenjongo zesondo okanye iifilimu kunye nomxholo wesondo - oko kusenzo sokwaphulo-mthetho, ngenxa yokuba inokuphazamisa umntwana, omncinci kwaye ongenamava, angethusa kwaye angethuse. Kwakhona ii-imeyile ezihlambulukileyo okanye isicelo sokuthumela imifanekiso ngokwazo zilwaphulo-mthetho olukhuthazayo.
Ukuxhatshazwa ngokwesondo kwindawo yokusebenzela akuyona into engeyona nto
Umtsalane ogqibeleleyo wokungena ngokukhuselekileyo - Iingcebiso zabantwana
Okuphambili kukubhengezwa. Musa ukuthumela idilesi yakho okanye inombolo yefowuni kwi-intanethi. Ungalokothi uthumele idatha yakho kumntu ongaziwayo, ungazibali idatha yedatha okanye imifanekiso yentsapho. Ukuba usebenzisa igama lomnxeba, akufanele liqule igama lakho langempela okanye ubonakalise ubudala bakho, njengoLisa99. Ukusuka kulo, umgwebi unokuphetha ngokuthi uLisa wazalwa ngonyaka we xxxx. Sebenzisa amanani amaninzi kunye namagama. Kwiphepha efana ne-Facebook uyaphawula ngakumbi ukuba awuyi kubeka isithunzi sakho. Qinisekisa ukuba isithombe asiyisimemo sabasetyhini abashukumisayo.
Okwenene nxamnye nendawo ebonakalayo. Inetha yindawo, indawo ngaphandle kwemida kunye namathuba angenamkhawulo. Yonke into idlwengula apha: evela kumhlobo omhle phezu kwezigebengu ezincinci kumphangi webhanki kunye nomntwana we-molester. Ngokuqhelekileyo izigebengu ezimbi kakhulu zigqoka ngeengubo ezingenanto. Qaphela ukuba akukho mhlobo emva koqhagamshelwano oluhle.
Ukuba ufumana into emnandi, khuluma nabazali bakho malunga nalo. Musa ukulingwa ukwenza into ongafuniyo. Imifanekiso eyimfihlo kunye neenombolo zomnxeba kunye nokuqeshwa kwabakhenkethi akukho ezandleni zabangamaziyo.
Qaphela ukuba abantu bokwenene bafihla emva kweefayile ezibonakalayo. Akuyena wonke umntu ungumhlobo - nokuba iMickeyMouse17 uyindoda enhle kunye nelona lizwi elihle libiza ukuba liyibuzo.
Akukho ntlanganiso kunye nabahlobo be-intanethi. Ungaze udibane nomhlobo owaziyo kuphela kwi-intanethi. Apha ikhona enye ingozi enkulu. Musa ukuphendula kwiimemo zolu hlobo! Ngokuphambene noko: Ukuba uziva uhlekisayo, kufuneka uxelele ngokukhawuleza le phrofayili kumlawuli weforum. Kuyafana nakwiimeko xa umntu ehlangana nawe kunye nomxholo wesini, ngaba iividiyo, iifoto okanye iitekisi ezifanelekileyo. Umqhubi wesayithi unokukhawuleza ukuvula amapolisa.
Nabani na okholelwa ukuba ukuxhashazwa ngokwesondo ngoononophelo lwabantwana kunye nabaselula baya kuqala xa kufikelelwe kwindlela ethile yesenzo socansi. Kodwa ukuxhatshazwa ngokwesini okanye ukuxhatshazwa ngokwesini kuqale? Kucacile ukuba awukwazi ukuwucala lo mda ngokucacileyo. Nangona kunjalo, nayiphi na into ephula isithunzi kunye nokuthanda komntwana kucacile isenzo sobugebengu.
Ukukhuselwa ngokuxhatshazwa ngokwesini ngoonwabo
Ngaloo nkcazo, le nto inokuba yinto ebonakalayo ecacileyo okanye into ehlazo. Uluntu lwethu lukhulu kakhulu kulo mbandela, olufanelekileyo kakhulu ngakwesinye icala, kwaye wonke umntu osebenza kumaziko emfundo uyayithobela ingqalelo. Kodwa kukhokelela kwinto yokuba oobawo abaninzi bebanqanda kakhulu abantwana babo, ukwenjenjalo ukuba bangenzi nto engalunganga.
Ukusetyenziswa kakubi ngokwesondo kwimbonakalo yayo
Ekuqaleni ukuxhatshazwa. Kwiindawo zokuxoxa okanye iifom zabantwana okanye abaselula bathunyelwa iividiyo okanye iifoto ezinomxholo ococekileyo. Ngamanye amaxesha bacelwa ukuba benze izenzo zesondo ngokwazo, ngokugqithiseleyo nge-Skype, ngoko umoni obenokuzijonga. Ezinye iintlobo zokuhlukunyezwa zibandakanya isibheno sezitrato okanye ukuhlaziya amagama anesondo kunye nokuqulathwe.
Isinyathelo esilandelayo sichukumisa umntwana. Ummangalelwa ufuna ukuba achukumiswe ngumntwana kwindawo ye-pubic, uyichukumise ngokwakhe okanye umkhuthaze ukuba amthinte aze ambone. Ukuthintela kunokukhokelela ekudlwengulweni kunye / okanye kubandakanya zonke ezinye izenzo zesondo. Ngokuqinisekileyo, ukugqithiswa koononophelo loluntu kuyingxenye yokuxhaphazwa ngokwesondo ngokobantwana nabaselula. Apha, umntwana unyanzelekile ukuba agxininise kunye nefilimu aze athathe umfanekiso. Ngamanye amaxesha kunyanzelekile ukuba ubukele iifoto kunye neefilimu zoononografi okanye ukujonga izenzo zabanye. Iifom zokuxhaphazwa ngokwesondo zifana neentlobo zengqondo ezinzulu zabalandeli!
Kutheni kungabonakali kangangoko?
Ukuxhatshazwa koxhatshazwa ngokwesini kuya phezulu. Oku kubangelwa kukuba abaphangi bavame ukuvela kwimeko yomntwana. Kwiimeko ezininzi, ngelishwa amalungu omndeni asebenzisa amandla awo phezu komntwana. Umntwana usebudlelwaneni bokuxhomekeka, engqondweni nangokwenyama, kwaye akakwazi ukumelana nokuhlaselwa ngokwesondo ixesha elide. Nangona ithetha ukuthetha nomnye umntu omdala kwintsapho, kaninzi ayikhokeli kumapolisa. Inyaniso kukuba, ukusondela komntwana kumenzi wobugwenxa, kungenakwenzeka ukuba ityala liya kubikwa kwaye lithathwe enkundleni. Inyaniso kukuba kusekho amantombazana ayenamaxhoba olwaphulo-mthetho. Amadoda abenzi bokudlwengula aqhelekileyo avela kwindawo esondeleyo okanye i-circle circle of acquaintances.
Ekubeni amaxhoba ahlala ethule ixesha elide, kunzima ukubona ukuxhaphazwa ngokwesondo. Ngokuqhelekileyo uyaqaphela xa sele ephuzile kakhulu kwaye sele impawu zengqondo okanye zomzimba zenzekile. Kukho inani leempawu ezingabonakalisa ukuxhatshazwa ngokwesondo, kodwa akubonakaliswanga oko.
Ziziphi iimpawu zokuxhaphazwa ngokwesondo?
Ngokukodwa kwesi sihloko, abaninzi banesibindi sokubonakalisa ukusola, kuba kunjalo, umtyholi okhohlakeleyo udla ubomi obunzima kunye nezigxeko kwaye kaninzi akayi kubuyiselwa. Nangona kunjalo, kungenokuba ngumdla wenzondo kuphela ukuvakalisa ukukhankanya ngaphezu kokunyanzelisa ukusetyenziswa kakubi kwaye ixhoba lihlupheka iminyaka.
Utshintsho lwendlela yokuziphatha luyaxolisa!
Utshintsho lwendlela yokuziphatha luhlala luphawu lokuqala lokuxhaphazwa ngokwesondo. Oko akuthethi ukuba nayiphi indlela yokuziphatha engaqhelekanga isekelwe ekuhlaselweni ngokwesondo. Kanye ngokunjalo, umsindo kunye nabahlobo, ukungena kwesikolo okanye ukulahlekelwa ngumntu osondeleyo kunokubangela ukuba lo tshintsho kuziphatha. Kwakhona, ezinye iinkqubo zokufunda kunye namanqanaba okuphuhliswa ngokuqhelekileyo zibangelwa ukuziphatha okungekho nto.
Ukuqwalasela ngokuchanekileyo kaninzi kunika ulwazi, kodwa omnye akufanele akhohlwe ukuba ngamnye umntwana uphatha kakubi ulwaphulo-mthetho ngokwempawu, ubudala, umenzi-mthetho kunye nomgaqo-siseko. Kubalulekile: Okungaqhelekanga kubonakele, ukukhankanya okunzima kunzima!
Ukunyanzeliswa kwimizekelo yokuziphatha kwasebuntwaneni
Inani leempawu zikhankanya ngokukodwa kwaye kufuneka ziqaphele abazali. Ezi ziquka ingakumbi kwiintsana: zokulala nasisihlo nangakumbi amabi, bedwetting okanye ukuhamba kwesisu emva elide Saubersein, uloyiko ezintsha okanye ukucalulwa ngokubanzi, ukuziphatha whiny, ukuhlehla yokuziphatha uvukwa ukuba umntwana ngokwenene agcinwe (umzekelo, ukukhotha iminwe, baby intetho) neemfuno eyandileyo ukhuseleko, ilahleko namdla okanye iminqweno, ukungabikho qha, uloyiko nobudlelwane kwezentlalo, iqhele kwihlabathi ngokwayo, inzala yayo eyahlukileyo izidumbu nabanye abantwana kunye nabantu abadala, ibekwe ngendlela ekhethekileyo nayo ibonisa kulo mdlalo (izenzo zesondo badla kuhlenga kwi umdlalo okanye isihloko lomdlalo), ukulahlekelwa ngumdla kwizinto ezintle nazo.
Kubantwana abakhulu, kukho iziqhelo ezingabonakaliyo ezinokusetyenziswa kwiidakamizwa, ulwaphulo-mthetho, ukuxinezeleka, iingcamango zokuzibulala, ukuphazamiseka kokutya, kunye nokwehla kokusebenza kwesikolo. Ngokuqhelekileyo abatsha abanjalo banokubonisa ukuziphatha okubi ngokwesondo.
Izibonakaliso zomzimba zokuxhaphazwa ngokwesondo
Ukongeza kwiinguqu ezikhankanywe ngentla apha ziqhelekileyo zizibonakaliso zomzimba, ezodwa kodwa kaninzi azibaniki ubungqina obaneleyo bokuxhaphazwa ngokwesondo. Ngokusoloko banokukrokra kuphela malunga nokungaqhelekanga kwengqondo. iintlungu esiswini, nesisu esibuhlungu, bazigruzule, igazi umchamo (ngokuba zesinye) okanye intshukumo kwesisu (by fistulas ezimpundu) kusenokuba sisoyika kwaye ngaphezulu okanye ngaphantsi engenabungozi kwindalo, kodwa kumathuba amaninzi iimpawu zokuxhatshazwa ngokwesondo. Zala maxesha ziquka intlungu zangasese, rhoqo ukurhawuzelela, ukonzakala esiswini, izifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini nokukhulelwa okungafunekiyo.
Ukuxhatshazwa ngokwesondo kubonakala xa umntwana efihlakele kumntu omdala, okanye xa sele ibonisa iimpawu ezibonakalayo kwaye abazali bayaxolisa kwaye baqale ukuphanda.
Ukungabi namandla kudla ngokulandela ukutshatyalaliswa! Yintoni na ngoku? Ndiya phambili njani ukukhusela umntwana wam kwaye ndijezise umenzi wobubi? Ukuba umntwana uphelele kakhulu ngento, ngokuqhelekileyo uyayibhala okanye ayenze kwiinqununu. Kukho inani leempawu ezibonisa ukuxhatshazwa ngokwesondo kwaye zichazwe kwenye indawo.
Kubaluleke kakhulu ukuthatha umntwana ngokungathandekiyo xa kuthetha ukusetyenziswa kakubi. Kwiimeko ezimbalwa kakhulu abantwana bacinga into enjalo. Ngoko bathabatha yonke into enzulu ngokukodwa, nangona kunjalo ingacacile kwaye ibhalwe ngekhowudi.
Izibonakaliso zokuxhaphazwa ngokwesondo ngomntwana
Ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, ukuba abantwana bahlala bengagxininisi kuba umenzi wobubi uvela kwindawo esondeleyo, ngokuqhelekileyo nakwiintsapho zabo! Oku kunokuba yinto ebalulekileyo yokukhusela abantwana!
Hlala uxolo kwaye uqinise umntwana!
Hlala uxolo, nangona kunzima. Umntwana usekwimeko apho evakalelwa engenangqondo, edidekile kwaye esoloko enetyala. Akunjalo ngamaxesha abo ngabenzi bobubi ababetyala umntwana.
Kubaluleke kakhulu ukufumana uncedo lobugcisa ngokukhawuleza. Bangakwazi ukuthuthuzela, ukuqinisa, ukukhusela nokubamba umntwana wakho, kodwa kuphela izazi zeengqondo kunye nabaqeqeshi baqeqeshwa ukunyanga umonakalo wengqondo kwanoma yikuphi ukusetyenziswa kweziyobisi. Baya kunceda abazali bajongane nokuxhatshazwa ngokwesini ngomntwana wabo kwaye banokubhekisela kwiimeko ezinzima kunye nendlela yokujongana nazo.
Njengomzali, unako ukumnceda umntwana ngokuqhelekileyo njengokuba njalo. Nangona kubonakala kungabonakaliyo kwaye kungabonakali kakuhle, umkhwa unika ukhuseleko kwaye unceda umntwana ukuba asebenze amava amanxeba.
Ngamanye amaxesha kuqala ngokukrokra okukhathalayo kungekudala. Ukuba umntwana akathethi ngokuxhaphazwa ngokwesini, akufanele uhlasele ngemibandela ecacileyo, kuba mhlawumbi mhlawumbi umntwana uyavalwa.
Tshela umntwana malunga nosuku lwakhe, ngokucacileyo ngaphezu kwexesha eliqhelekileyo, kwaye uphulaphule ngokukhawuleza ukuba uthetha ngokukhawuleza iziganeko ezingathandekiyo. Ungalokothi - ungangcikiva umntwana ngesiqubulo esithi: "Kodwa bekufuneka utsho ngokukhawuleza!" Okanye bubi kakhulu: "Kutheni ubekezelele!" Nokuba: "Ukuba ndinguwe ... "
Iingxelo ezinjalo zikhuthaze ngakumbi ityala lomntwana kwaye livakale ngakumbi emva koko. Kubangela ukuba umntwana abe nesibindi esininzi sokujongana nokusetyenziswa kakubi. Ukuba ufumene ukutshatyalaliswa kokuqala, kufuneka, njengoko kuchaziwe ngentla, cela abasebenzi abakhethekileyo ukuba bancede. Kwiimeko ezininzi, oku kubandakanya amapolisa, kuba ukuxhaphazwa kwabantwana kuyisenzo esinzulu esimele sijeziswe ukukhusela bonke abanye abantwana kulo menzi-mthetho. Kufuneka njani kwaye nawaphi na amapolisa abandakanyekayo ukwenzela inzuzo yomntwana ngokubonisana neengcali zeengqondo.
Ukukhuselwa kokushona kwelanga kunye nemiphumo yayo
Iimveliso zendalo - ukukhuselwa elangeni
Imali yePokhethi | Imfundo yabantwana
Kutheni i-kindergarten? | Kindergarten kunye nemfundo
Iincwadi zezingane - Kutheni ukubaluleka kokufunda? | imfundo
Ukuziphatha kweNtlalo yabantwana | Abantwana bezemfundo
Uncedo, umntwana wam uxoki ... imfundo
Isigaba sokuzimela | imfundo
Ukutshatyalaliswa kwabantwana abaselula ... imfundo
Uthando olukhulu lokuqala | imfundo
Kutheni kufuneka ndifune ukuba nabantwana? imfundo
Ukuziphatha kakuhle ngexesha lokuduma kwezulu imfundo
Umyalelo kwi-wardrobe yabantwana | imfundo